XOG: Maxaa kala soctaa qaabka la doonaayo in lagu xaliyo Buuqa ka dhashay Mooshinka Jawaari ﴾Akhriso 4 qodob﴿ – Xeernews24
XOG: Maxaa kala soctaa qaabka la doonaayo in lagu xaliyo Buuqa ka dhashay Mooshinka Jawaari ﴾Akhriso 4 qodob﴿
1. April 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Waxaa soo baxaaya warar kala duwan oo ku aadan hanaanka la doonaayo in lagu xaliyo Mooshinka baarlamaanka Soomaalia ka yaala Guddoomiye Jawaari.
Wararku waxa ay sheegayaan in Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaalia Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo Xildhibaanada kasoo horjeeda ay ku qanacsan yihiin in Mooshinka codka loo qaado iyadoo aanu jirin is qabqabsi iyo Khilaaf muuqda.
1­: In marka hore ciidamada cusub laga wareejiyo Xarunta baarlamaanka.
2­: In meesha laga saaro Jajuubka Xildhibaanada.
3: ­In Xildhibaanada labada garab lasiiyo wakhti ku filan oo ay kusoo dhameystiran karaan codadkooda.
4: ­In haddii leysku raaco codeyn ay goobjoog ka noqdaan xubnaha saaxiibada caalamka ka jooga Soomaalia, si codeynta ay u noqoto mid xalaal ah.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/04/Khere-iyo-Jawaari.jpg 170 296 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-04-01 11:08:442018-04-01 11:08:44XOG: Maxaa kala soctaa qaabka la doonaayo in lagu xaliyo Buuqa ka dhashay Mooshinka Jawaari ﴾Akhriso 4 qodob﴿
Xaashi Cumar oo iska diiday 3-Malyan Euro oo Magdhaw ahaan loogu xukumay Shaqadii Uu Sumcadda Ku Helay Dr Abiy(Abiyot)